Asetenam Nsɛm: Bere Nyinaa Som Adwuma​—Baabi a Ɛde Me Akopue | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Bere Nyinaa Som Adwuma—Baabi a Ɛde Me Akopue
Robert Wallen anom asɛm
Sɛ mehwɛ mfe 65 a mede ayɛ bere nyinaa som adwuma no a, metumi aka paa sɛ mahu mmere pa pɛn. Nanso eyi nkyerɛ sɛ biribiara ayɛ sɔɔsɔɔ ama me. Da bi wɔ hɔ mpo a na m’abam abu. (Dw. 34:12; 94:19) Nanso ne nyinaa mu no, manya nhyira ne akomatɔyam wɔ m’asetena mu!
SEPTEMBER 7, 1950 na wɔfrɛɛ me kɔɔ Brooklyn Betel. Saa bere no na anuanom mmarima ne mmea 355 na wɔwɔ hɔ. Na wofi aman ahorow ahorow so na wɔaba hɔ. Sɛ wopɛ ɔbabun a wadi mfe 19 a wubenya bi, na saa ara nso na wopɛ akwakoraa anaa aberewa a wadi mfe 80 a wubenya bi. Na Betel abusua no mufo pii yɛ Kristofo a wɔasra wɔn.
NEA ƐYƐE A MEBƐSOM YEHOWA
Bere a mebɔɔ asu; na madi mfe 10
Me maame na ɔboaa me ma mibehuu “anigye Nyankopɔn” no. (1 Tim. 1:11) Bere a ofii ase som Yehowa no, na meyɛ abarimaa. Mebɔɔ asu July 1, 1939 wɔ ɔmansin nhyiam bi ase wɔ Columbus, Nebraska, U.S.A. Saa bere no, na madi mfe du. Na yɛyɛ nnipa bɛyɛ ɔha na ahyiam wɔ ɔdan bi mu retie Joseph Rutherford kasa bi a wɔakyere agu apaawa so. Ɔkasa no asɛmti ne “Kankabi Nniso Anaa Ahofadi.” Yegu so retie kasa no, yehui sɛ nnipadɔm bi abegu dan no akyi. Wɔbɔ wuraa dan no mu pam yɛn fii kurom hɔ. Ɛbaa saa no, yekohyiaa onua bi fie wɔ kurow no akyi baabi toaa dwumadi no so. Wo ara wohwɛ nea ɛkɔɔ so yi a, ɛbɛyɛ dɛn na me werɛ afi da a mebɔɔ asu?
Me maame yɛɛ nea obetumi biara de nokware no duaa me mu. Ná me papa yɛ nipa pa, na na ɔntoto n’abusua ase. Nanso na n’ani nnye nyamesom ho, enti nea mɛyɛ wɔ asafo no mu deɛ na ɛmfa ne ho. Me maame ne anuanom a wɔwɔ Omaha Asafo no mu hyɛɛ me nkuran paa.
NEA MISII GYINAE SƐ MƐYƐ
Aka kakra ma mawie ntoaso sukuu no, na ɛsɛ sɛ misi gyinae hwɛ nea mɛyɛ daakye. Saa bere no, edu akwamma biara a, na me ne m’atipɛnfo yɛ akwampaefo aboafo adwuma no bi.
Ná John Chimiklis ne Ted Jaracz yɛ mmerante asigyafo a afei na wɔawie Gilead Sukuu adesuakuw a ɛto so ason. Wɔma wɔbɛyɛɛ ahwɛfo akwantufo wɔ yɛn mpɔtam hɔ. Nea na ɛyɛ me nwonwa ne sɛ na wɔyɛ mmerante a wonnyinii pii—bɛyɛ mfe 20 ne kakra. Saa bere no na madi mfe 18, na na ɛrenkyɛ na mawie ntoaso sukuu. Meda so ara kae asɛm bi a Onua Chimiklis bisaa me. Na ɔpɛ sɛ ohu nea miwie sukuu a mɛyɛ. Bere a mekaa nea mɛyɛ no, ɔkae sɛ: “Mo! Fa wo ho hyɛ bere nyinaa som adwuma no mu ntɛm ara. Wunnim baabi a ɛde wo bɛkɔ akopue.” Afotu yi ne anuanom baanu yi nhwɛso pusuw me paa. Enti miwiee sukuu ara na mifii akwampae adwuma ase 1948.
NEA ƐYƐE A MEBƐPUEE BETEL
Me ne m’awofo kɔɔ amanaman ntam nhyiam July 1950 wɔ Yankee Stadium, New York City. Bere a yɛwɔ hɔ no, mekɔɔ nhyiam a wɔyɛ ma wɔn a wɔpɛ sɛ wɔkɔsom wɔ Betel no bi. Akyiri yi mekyerɛw krataa sɛ mepɛ sɛ mesom wɔ hɔ.
Ɛwom, na me papa nsiw me kwan sɛ me ne wɔn bɛtena ayɛ akwampae adwuma no, nanso ɔkae sɛ ɛsɛ sɛ mitua sika kakra de boa dan ne aduan ho ka. Enti da bi wɔ August mu no, misiim sɛ merekɔhwehwɛ adwuma. Bere a menam kwan so no, meman faa baabi a yeyi yɛn nkrataa. Mihuu krataa bi a wɔakyerɛw afi Brooklyn abrɛ me. Na efi Nathan H. Knorr hɔ. Ɔkyerɛw sɛ: “Yɛn nsa aka krataa a wokyerɛw sɛ wopɛ sɛ wobɛyɛ adwuma wɔ Betel no. Migye di sɛ wopene so sɛ wobɛtena Betel wo nkwa nna nyinaa. Ɛnde, mepɛ sɛ woba Betel wɔ 124 Columbia Heights, Brooklyn, New York, September 7, 1950.”
Bere a me papa fii adwuma baa fie no, meka kyerɛɛ no sɛ manya adwuma. Ɔkae sɛ: “Ɛyɛ asɛmpa. Ɛhe na worekɔyɛ adwuma?” Mekae sɛ, “Brooklyn Betel. Bosome biara wɔbɛma me dɔla 10.” Ɛyɛɛ no nwonwa kakra, nanso ɔkae sɛ, sɛ ɛno na mepɛ sɛ meyɛ a, ɛnde menyere me ho nyɛ no yiye. Ankyɛ na me papa bɔɔ asu wɔ ɔmantam nhyiam bi ase wɔ Yankee Stadium 1953.
Me ne Alfred Nussrallah; yɛboom yɛɛ akwampae adwuma
Anigyesɛm ne sɛ wɔfrɛɛ Alfred Nussrallah a na me ne no yɛ akwampae adwuma no nso sɛ ɔmmra Betel. Enti me ne no boom kɔe. Akyiri yi ɔwaree Joan na ɔne no kɔɔ Gilead. Wowiei no, wɔde wɔn kɔɔ Lebanon kɔyɛɛ asɛmpatrɛwfo wɔ hɔ. Akyiri yi wɔsan de wɔn baa United States maa Onua Nussrallah bɛyɛɛ ɔmansin sohwɛfo.
Baabi a midii kan yɛɛ adwuma wɔ Betel ne Bindery, baabi a wɔpam nhoma. Nhoma a edi kan a meyɛɛ ho adwuma ne What Has Religion Done for Mankind? Bɛyɛ asram awotwe akyi no, woyii me kɔɔ Ɔsom Dwumadibea (Service Department). Saa bere no na Onua Thomas J. Sullivan na ɔhwɛ hɔ. Ɛyɛɛ me dɛ sɛ me ne no yɛɛ adwuma. Na ɔne asafo no abɔ akyɛ, enti na n’adwenem abue na na n’ani so da hɔ. Misuaa nneɛma pii fii ne hɔ.
Bere a midii bɛyɛ mfe abiɛsa wɔ Ɔsom Dwumadibea hɔ no, Max Larson a na ɔhwɛ nhomatintim so no ka kyerɛɛ me sɛ Onua Knorr pɛ sɛ ohu me. Na ɛyɛ me sɛ gyama mayɛ bɔne bi na ɔrehwehwɛ me. Afei bere a mihuu nea enti a Onua Knorr afrɛ me no, miguu ahome. Na ɔpɛ sɛ ohu sɛ mayɛ m’adwene sɛ mefi Betel da bi. Na ɔrepɛ obi ne no ayɛ adwuma wɔ ne ɔfese bere tiaa bi, enti na ɔpɛ sɛ ohu sɛ metumi ayɛ adwuma no anaa. Meka kyerɛɛ no sɛ menyɛɛ m’adwene sɛ merebefi Betel. Meyɛɛ adwuma wɔ ne ɔfese hɔ mfe 20.
Masua nneɛma pii afi Onua Sullivan ne Onua Knorr ne afoforo a me ne wɔn ayɛ adwuma wɔ Betel te sɛ Milton Henschel, Klaus Jensen, Max Larson, Hugo Riemer, ne Grant Suiter hɔ, na daa meka sɛ, sɛ ɛyɛ sukuu a anka merentumi ntua ho ka. *
Mihui sɛ anuanom a me ne wɔn yɛɛ adwuma no ani ku adwuma a ɛhyɛ wɔn nsa wɔ ahyehyɛde no mu ho. Wotumi toto nneɛma fɛfɛɛfɛ. Yɛhwɛ Onua Knorr sɛɛ a, na okum ne ho yɛ adwuma. Nea na esi n’ani so ara ne sɛ Ahenni adwuma no bɛtrɛw akɔ baabiara. Wɔn a wɔne no yɛɛ adwuma no hui sɛ n’anim kɔ nyɛ den. Sɛ ɔne yɛn adwene nhyia wɔ asɛm bi ho mpo a, yetumi kyerɛ yɛn adwene na otie.
Bere bi Onua Knorr ka kyerɛɛ me sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yebu no sɛ ɛho nhia pii, nanso ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani ku nneɛma ɛte saa nyinaa ho. Ɔkaa biribi de yɛɛ nhwɛso. Ɔkae sɛ bere a ɔhwɛ nhomatintimbea so no, ɛyɛ a Onua Rutherford frɛ no wɔ fon so ka sɛ: “Onua Knorr, sɛ wopɔn adwuma na worebedidi a, brɛ me eraser a metumi de apopa ade. Mihia bi ayɛ adwuma.” Onua Knorr kae sɛ, onya te saa pɛ, na wakɔfa eraser no bi ahyɛ ne bɔtɔ mu. Enti dumien bɔe ara na ɔde akogu Onua Rutherford ɔfese. Na ɛyɛ ade ketewa bi, nanso na ehia Onua Rutherford paa. Afei Onua Knorr ka kyerɛɛ me sɛ: “Mesrɛ wo anɔpa biara ɛyɛ a sensene pɛnsere ano begu me pon so ma me.” Mesensenee pɛnsere ano maa no mfe pii.
Ná Onua Knorr taa ka sɛ, sɛ obi rekyerɛ wo adwuma bi a, wɛn w’aso tie. Da bi ɔkyerɛɛ me sɛnea menyɛ adwuma bi, nanso mantie no yiye. Memaa odii yaw paa. Asɛm no haw me, enti mekyerɛw krataa tiawa bi ka kyerɛɛ no sɛ ɛyɛ me yaw sɛ meyɛɛ saa. Mekae wɔ krataa no mu sɛ ɛbɛyɛ papa sɛ obeyi me afi ne ɔfese hɔ. Saa anɔpa no ara Onua Knorr baa me nkyɛn bɛkaa kyerɛɛ me sɛ: “Robert, mahu wo krataa no. Wudii mfomso, na me ne wo aka ho asɛm, enti migye di sɛ da foforo wobɛyɛ ahwɛyiye. Ma yɛntoa yɛn adwuma so.” Nea ɔkae no kaa me koma paa.
AWARE HO ASƐM
Bere a midii mfe awotwe wɔ Betel no, na menyɛɛ m’adwene sɛ mefi hɔ, nanso nneɛma sesae. Aka kakra ma yɛayɛ amanaman ntam nhyiam wɔ Yankee Stadium ne Polo Grounds wɔ 1958 mu no, mihyiaa onuawa bi a ɔde Lorraine Brookes. Midii kan huu no 1955. Saa bere no na ɔyɛ ɔkwampaefo wɔ Montreal, Canada. Nea na esi n’ani so ara ne bere nyinaa som adwuma no, na na wayɛ krado sɛ baabiara a Yehowa asafo no de no bɛkɔ no, ɔbɛkɔ. Eyi kaa me koma paa. Na Lorraine botae ara ne sɛ ɔbɛkɔ Gilead Sukuu. Enti bere a odii mfe 22 no, wɔfrɛɛ no sɛ ɔnkɔ Gilead Sukuu wɔ 1956 mu. Na ɛyɛ adesuakuw a ɛto so 27. Owiei no, wɔde no kɔɔ Brazil kɔyɛɛ ɔsɛmpatrɛwfo wɔ hɔ. Me ne Lorraine hyɛɛ yɛn adamfofa no mu gya afe 1958, na ɔpenee so sɛ ɔbɛware me. Yɛyɛɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛware afe a edi hɔ no na yɛakɔyɛ asɛmpatrɛw adwuma.
Bere a meka kyerɛɛ Onua Knorr sɛ mepɛ sɛ meware no, ɔkae sɛ ɛbɛyɛ yiye a yɛntwɛn mfe abiɛsa ansa na yɛaware na yɛatumi asom wɔ Brooklyn Betel. Saa bere no, sɛ obi pɛ sɛ ɔware na ɔkɔ so tena Betel a, na ɛsɛ sɛ odi mfe du anaa nea ɛboro saa wɔ Betel na ne hokafo nso di mfe abiɛsa wɔ hɔ. Enti Lorraine penee so sɛ ɔbɛyɛ adwuma wɔ Brazil Betel mfe abien na wabɛyɛ afe biako wɔ Brooklyn Betel ansa na yɛaware.
Mfe abien a edi kan no deɛ na nkrataakyerɛw na yɛde di nkitaho. Saa bere no sɛ wofrɛ obi wɔ tɛlɛfon so a na ɛbɔ ka paa; na Intanɛt biara nso nni hɔ. Yɛwaree September 16, 1961, na hwɛ, Onua Knorr na ɔmaa yɛn ayeforohyia kasa no! Ampa, mfe kakra a yɛde twɛnee no yɛɛ yɛn ani so tenteenten. Nanso seesei sɛ yebu kɔmpɔ hwɛ yɛn akyi a, yehu sɛ eye paa sɛ yɛtwɛnee. Yɛaware bɛboro mfe 50 ni, na anigye ne akomatɔyam ahyɛ yɛn aware no mu den!
Ɛda a yehyiaa ayeforo. Fi benkum: Nathan H. Knorr, Patricia Brookes (Lorraine nuabea), Lorraine ne me, Curtis Johnson, Faye ne Roy Wallen (m’awofo)
Afe 1964 no, minyaa hokwan kɔsrasraa baa dwumadibea ahorow wɔ aman ahorow so hyɛɛ wɔn nkuran. Saa bere no na yɛn yerenom nka yɛn ho nkɔ bi. Wɔyɛɛ nsakrae 1977; enti afei na yɛne yɛn yerenom kɔ. Saa afe no, me ne Lorraine kaa Grant ne Edith Suiter ho kɔsrasraa baa dwumadibea a ɛwɔ Germany, Austria, Greece, Cyprus, Turkey, ne Israel. Sɛ yɛka ne nyinaa bom a, makɔ aman bɛyɛ 70 so.
Akwantu yi biako de yɛn kopuee Brazil 1980 mu, na yɛkɔsraa kurow bi a ɛde Belém. Bere bi na Lorraine yɛ ɔsɛmpatrɛwfo wɔ hɔ. Afei nso yenyaa hokwan kɔsraa anuanom wɔ Manaus, na memaa ɔkasa wɔ stadium bi. Yɛwɔ hɔ no, yehui sɛ nnipa bi atew wɔn ho te baabi. Ɛyɛ Brazilfo amammerɛ sɛ, sɛ mmea rekyia obi a, wɔfew n’afono ho, na mmarima no nso rekyia a, wɔde nsa to nsayam. Nanso na nnipa a wɔatew wɔn ho yi nkyia bi. Adɛn ntia?
Na wɔyɛ yɛn nuanom Adansefo a wofi akwatafo atenae wɔ Amazon kwae mu. Na wɔmpɛ sɛ yare no bɛsan afoforo nti na wɔtew wɔn ho no. Nanso wohwɛ wɔn anim a wuhu sɛ wɔn ani agye paa. Eyi kaa yɛn koma; yɛn werɛ remfi da! Yesaia asɛm no yɛ nokware sɛ: “Me nkoa bedi ahurusi, koma pa nti.”—Yes. 65:14.
YƐANYA ANIGYE NE AKOMATƆYAM
Me ne Lorraine de bɛboro mfe 60 na ayɛ bere nyinaa som adwuma no, na ne nyinaa mu no, yɛama Yehowa ahyehyɛde no akyerɛ yɛn kwan. Sɛ yɛkaakae nhyira a yɛanya a, yɛn ani gye paa. Seesei mintumi ntutu akwan te sɛ kan no, nanso daa mitumi yɛ adwuma de boa Akwankyerɛ Kuw no. Me ne Nsɛm Ho Dwumadi Boayikuw ne Ɔsom Boayikuw na ɛyɛ adwuma. Ɛyɛ me dɛ sɛ mitumi yɛ biribi kakra de boa anuanom a wɔwɔ wiase nyinaa. Ade a ɛyɛ yɛn nwonwa paa ne mmerante ne mmabaa pii a wɔatu wɔn ho ama reyɛ bere nyinaa som adwuma no. Wokura Yesaia su yi bi: “Mini, soma me”! (Yes. 6:8) Nnipadɔm a wɔreyɛ bere nyinaa som adwuma no ma mihu sɛ asɛm a ɔmansin sohwɛfo no ka kyerɛɛ me no yɛ nokware: “Fa wo ho hyɛ bere nyinaa som adwuma no mu ntɛm ara. Wunnim baabi a ɛde wo bɛkɔ akopue.”
^ nky. 20 Sɛ wopɛ anuanom a yɛabɔ wɔn din yi bi ho asɛm a hwɛ Ɔwɛn-Aban (Borɔfo de) a edidi so yi: Thomas J. Sullivan (August 15, 1965); Klaus Jensen (October 15, 1969); Max Larson (September 1, 1989); Hugo Riemer (September 15, 1964); ne Grant Suiter (September 1, 1983).